Mụ, Mụ, M na Social Media | Martech Zone
Ọ bụghị banyere gị!
Otu ugboro ọzọ… ọ bụghị banyere gị!
Oge obula m n’ekwu okwu na soshal midia, onwere mgbe ole na ole ahu juru mmadu a juru anya ha kwesiri itinye mmiri na ya. Enwere nchegbu mgbe niile banyere otu ha ga esi achịkwa ya, oge metụtara, uru ha ga-erite, yana nchegbu na-enweghị atụ gbasara ọghọm ọ bụla ụlọ ọrụ ha nwere. Otu nsogbu nwere ike ịkwụsị azụmaahịa ịbanye na mgbasa ozi mmekọrịta… ma na-eme ya.
Na ihe omume mere na nso nso a, otu n'ime ndị sonyere ahụ nwere oge ọ na-esiri ike ịghọta ihe kpatara ya. “Gịnị kpatara na edoghị ibe ndị edo edo?”, Ka ha jụrụ? “Ebe ahụ ka m na-aga!”, Ka ha kwuru.
M zara, sị, “N’ihi na ị na-a payinga ntị na otu ị ọrụ, ebee ị gawa, oleekwa ị na-ekwurịta okwu. Not naghị a attentiona ntị na mkpa ndị ahịa, omume ndị ahịa, na ọwa ego ọhụụ na-emepe na mgbasa ozi ọhụụ. You're na-eche banyere ị. You're naghị eche echiche banyere ebe olile-anya gị na ndị ahịa gị nọrịị ma-ọbụ ebe ha na-abawanye ọnụọgụ. ”
Gị atụmanya na ndị ahịa na-na search maqbx chekwebe… ị nọ na nsonaazụ? Gị atụmanya na ndị ahịa na-arịọ maka enyemaka na LinkedIn… ị na-ege ntị e? Atụmanya gị na ndị ahịa na-ekwu maka gị na Facebook na Twitter. You na-aza? Ka ị na-edebanye aha maka nke ọzọ Twitter ojoro iji tinye ndị na-eso ụzọ 10,000.
Na-agbakwunye mgbasa ozi mmekọrịta gị na ụlọ ahịa ahịa gị na-agbakwunyekwu mgbagwoju anya? Ikekwe! Ọ bụrụ na ijikwa ya nke ọma, ọ nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ. Ọ bụrụ na ị gbanwee ya, ọ nwere ike ịbụ ọdachi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i tinye ya n'ọrụ, ọ pụrụ ịmị mkpụrụ.
Ozugbo e kwuchara isi okwu ahụ, ọkụ ahụ gbanyere na onye bịara ebe a bịara nwee ịnụ ọkụ n'obi banyere ohere ndị ahụ. Ahia gị kwesịkwara ịdị! Enwere otutu ohere n’ebe ahụ. Gbagogo!
Eziokwu niile. Agbanyeghị, amaghị m ụdị ndị sonyere na gị, mana onye ọ bụla chere na ibe Yellow kwesịrị ya? !!
Azụmahịa na-atụ egwu ugbu a, n'ihi na ego na-apụ n'anya. Ọzọkwa ha na-atụ ụjọ maka ịgbanye mgbasa ozi mmekọrịta. Ndi ọkachamara ahụ ha were n'ọrụ ka ọ nyere ha aka na ego ahụ?
Na iji Web chọpụta otu esi eme ya? E nwere ọtụtụ nde geeks na-enweghị echiche azụmaahịa maka onye ọ bụla na-azụ ahịa azụmaahịa n'ịntanetị na-azụ ahịa.
Egwu ha dị adị n'ezie. Ha na-blinkered. Kụziere ha…
Oh, ma ị maara, o doro anya na 'blog' ahụ anwụọla, maka ọrịre ma ọ dịkarịa ala. Nke a ọ bụ eziokwu?
Ọ bụrụ na ọ bụ, ihe niile a na-elekọta mmadụ mgbasa ozi scaremongering kwesịrị ịbụ ihe kpatara ya.
Jun 23, 2009 na 8:53 AM
Dị ka ọ bụla na-ajụ ajụjụ, enwere uru (ịkwado ikwu) iji kpọsaa na ibe Yellow. Cheta na enwere onu ogugu ndi okenye nke na adighi na Net. Ọ bụrụ na m chọrọ ịdabere na ha, enwere m ike ịnwale akwụkwọ ibe.
Banyere blog 'nwụrụ anwụ', echere m na ọ bụ nkwupụta enweghị atụ. A na-etinye blọọgụ ugbu a ngwa ngwa n'ime atụmatụ weebụ ọ bụla karịa mgbe ọ bụla. Blọọgụ na usoro nhazi usoro emeela ka ha bụrụ ngwa ọrụ kachasị dị irè iji nweta ọchụchọ ọchụchọ. Imirikiti azụmaahịa anaghị ede blọgụ maka ịre ahịa - anyị ga-ahụ ntụgharị ihu na nke ahụ. IHE ọ bụla ọzọ na-ajụ mgbasa ozi na-agbadata otu afọ karịa afọ ọzọ site na nyocha ọchụchọ.
Daalụ maka nzaghachi! Lelee nsonye gị ọzọ anya.
Jun 23, 2009 na 9:08 AM
Ekwenyere m na ịde blọgụ bụ ụzọ dị mma iji bulie SEO, yana na ọ ga-agbakwunye na mbọ mmadụ na-agba. Otú ọ dị, olee ụdị amaokwu ị nwere iji kwado okwu ndị ahụ na "a na-etinye blọọgụ ugbu a ngwa ngwa n'ime atụmatụ weebụ ọ bụla karịa mgbe ọ bụla"? Nakwa dị ka "blọọgụ azum etolitela bụrụ ngwa ọrụ kachasị dị irè iji nweta ọchụchọ ọchụchọ"?
Ọzọkwa, ekwere m maka ọtụtụ akụkụ na ihe ị na-ekwu, mana okwu ndị ahụ yiri ka ọ dị ntakịrị ike ma yie ka ha na-enwe mmeso.
Naanị ịmata ihe ma ọ bụrụ na ị nwere ike iduga m na ọgụgụ ụfọdụ ga-enyekwu nkwado maka nkwupụta gị. Daalụ.
Nwere ike nyochaa mgbe niile Ọnọdụ nke Blogosphere. My 2 cents bụ na ị kwesịrị ile anya na-ekwusara saịtị nke isi media na ị ga-ahụ ha Afọ Management Systems na-kwalite na-agụnye blọọgụ. Business ibu na ịde blọgụ bụkwa na a ịrịba ịrị elu… akwụ ụgwọ kwa Pịa bụ ala ma nyocha ọchụchọ adịghị. E nwere ọnụego ntụgharị dị elu na ROI na-esote na okporo ụzọ okporo ụzọ - na ịde blọgụ bụ ihe ngwọta kachasị dị ọnụ ala iji nweta ogo ogo.
Jun 23, 2009 na 6:29 AM
Chei, ozi a bara ezigbo uru. Ekwenyere m na ọ bụghị banyere m. Ndụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. hehehe
Nnukwu ozi. Enwere m ekele maka ndụmọdụ ndị dị mma. Marketingzụ ahịa ịntanetị bụ otu n'ime ihe ndị ahụ mmadụ chọrọ iji nyocha iji nweta mgbaka dị ukwuu maka ego ha.
Nọgidenụ na ozi na-abịa!
VP Marketing, Prọfesọ na-ere Ntanetị